१० जेठ, काठमाडौं । पाकिस्तानमा शुक्रबार कराँचीको विमानस्थलनजिकै भएको विमान दुर्घटनामा ९७ जनाको मृत्युको पुष्टि भएको छ । एयरबसको ए ३२० मोडलको विमान रिहायसी इलाकामा दुर्घटना भएको हो ।
यो विमान दुर्घटनाको कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन । यद्यपि स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार विमान चालकले एक पटक विमान ल्याण्डिङ गर्न असफल भएसँगै विमानमा प्राविधिक खराबी आएको सूचना दिएका थिए । त्यसपछि विमान दुर्घटना हुनुभन्दा ठीक पहिला विपत्तिको संकेतको रुपमा ‘मे डे–मे डे’ भन्ने सूचना पठाएका थिए ।
यो विमान दुर्घटनामा बाँच्न सफल एक व्यक्तिले आफ्नो कहानी यसरी सुनाएका छन् ।
कसरी बच्यो जुबेरको ज्यान ?
फ्लाई पीके ८३०३ ईदको अघिल्लो दिन लाहोरबाट ९१ यात्री लिएर कराँची आएको थियो । यो विमानमा धेरै मानिस परिवारसहित थिए । यो विमान दिउँसो साढे दुई बजे कराँचीको जिन्ना इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्याण्डिङ गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो ।
त्यतिबेला नै यो विमान दुर्घटना भएको हो । सामान्य चोट लागेर यो दुर्घटनामा बच्न सफल भएका जुबेरका अनुसार यो विमान ल्याण्डिङ गर्ने प्रयास गरिरहेको १० देखि १५ मिनेटपछि यो दुर्घटना भएको हो । उनी भन्छन्, ‘कसैलाई पनि यो विमान दुर्घटना हुँदैछ भन्ने थाहा थिएन । सबै मानिस आरामसँग बसिरहेका थिए ।’
विमान दुर्घटना भएपछि जुबेर बेहोस भए । उनलाई होस आउँदा सबैतिर चिच्याहट थियो । बच्चा र वयस्क मानिसहरु पनि कराइरहेका थिए । जुबेर आफूले भने त्यतिबेला केवल आगो देखेको बताउँछन् ।
‘मैले आफ्नो सिटबेल्ट खोलेँ । त्यसपछि मैले केही पर उज्यालो देखेँ र त्यसैतर्फ दौडिएँ । मलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्न १० फिटमाथिबाट हाम फाल्नुपर्‍यो’, जुबेरले भने ।
लाहोरबाट कराँची आइपुगेको विमान ल्याण्डिङभन्दा ठीक अगाडि यो विमान रिहाइसी जिन्ना गार्डन मोडल कोलोनीमा खसेको थियो । यो ठाउँ विमानस्थलभन्दा केवल ३.२ किलोमिटर टाढा छ ।
दुर्घटना हुनुपूर्व विमान चालकले इन्जिनमा खराबी आएको भन्दै विपत्तिको संकेत ‘मे डे’ जारी गरेका थिए । पीआईएका मुख्य कार्यकारी अधिकारी एयर वाइस मार्सल अरसदले दुर्घटना भएपछि तत्कालै पाइलटले ट्राफिक कन्ट्रोलमा विमानमा प्राविधिक समस्या आएको सूचना दिएको बताएका थिए ।
पाकिस्तानको समाचार च्यानल दुनिया न्यूजले एयर ट्राफिक कन्ट्रोल र पाइलटको बीचको कुराकानीको रेकर्डिङ सार्वजनिक भएको दाबी गरेको छ । यो रेकर्डिङमा पाइलटले भनेका छन्, ‘विमानका दुवै इन्जिनले काम गर्न छाडेका छन्, … मे डे …मे डे’
यो दुर्घटनालाई आफ्नै आँखाले देखेका उजैर खानले एक ठूलो विष्फोटको आवाज सुनेर उनी बाहिर निस्किएका थिए । उनका अनुसार यो दुर्घटनाबाट चार घर तत्कालै ध्वस्त भएका थिए । त्यहाँबाट धेरै धुँवा आइरहेको थियो । यी घर उनको छिमेकमा पर्छन् । ‘म तपाईलाई यो कति खतरनाक थियो भन्ने वर्णन गर्न सक्दिनँ’ उनले भने ।
घटनास्थलको नजिकै बस्ने डाक्टर नाजिम दुर्घटनापछि उनी बाहिर निस्किएकी थिइन् । त्यतिबेला सबैतिर धुँवा फैलिएको थियो । दुर्घटनास्थल घरबाट निकै नजिक भएकाले उनले त्यहाँका मानिसहरुको चित्कार सुनिरहेकी थिइन् ।
यो दुर्घटनामा अर्का एक व्यक्ति जफर मसूद पनि जीवित बचेका छन् । मसूद बैंक अफ पञ्जाबका अध्यक्ष हुन् । उनलाई दुर्घटनापछि गुलसन ए जौहर अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । सिन्ध प्रान्तका मुख्यमन्त्री मुराद अली शाहले उनीलाई अस्पतालमा भेटेका छन् ।
बेलझुण्डी अस्पतालबाट ८ जना संक्रमित निको भए
‘फ्याक्ट चेक’को विवादपछि ट्विटरलाई लक्षित गर्दै ट्रम्पले दिए कार्यकारी निर्देशन
पहिलो सगरमाथा आरोहणको नालीबेली
रुकुम चौरजहारी घटना : उच्चस्तरीय समितिले काम थाल्यो
रुकुम घटनाका दोषीमाथि कारबाही माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
भारतसँग वार्ताको औपचारिक डेटको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं : परराष्ट्रमन्त्री
गाउँपालिकाको नाका निगरानीमा शिक्षकलाई खटाइयो
पखेटा नभएको चराझैं भएकी छु
दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषको रकम सरकारको नियन्त्रणमा
खै कता गयो बालबालिकाको अधिकार?
सानो तर राम्रो मेरो गाउँ
प्रहरीकै भवन बनाउन अवैध काठको प्रयोग !
टी२० विश्वकपको निर्णय १० जुनपछि हुने
निको भएर फर्किए वरिष्ठ सैनिक अधिकृत
हजुरआमालाई १२ थरी औषधि समय मिलाएर खुवाउने जिम्मा मेरै हो
घर बस्दा मलाई भएका फाइदा र बेफाइदा
सेनाका उच्च अधिकारीले जिते कोरोना
भारतीय मिडियामा आएको समाचारप्रति नेपाली सेनाको आपत्ति
भारतको पश्चिम बंगालका मन्त्रीमा कोरोना पुष्टि
सर्लाहीमा जलेर एक जनाको मृत्यु
नेपाली सेनाले भन्यो – भारतीय मिडियाको समाचार प्रोपागाण्डा मात्रै
‘पाताल लोक’बारे अनुष्का भन्छिन्–‘हामीले समाजको चित्र देखाएका छौ’
सीमा नाकामा मृत्यु भएका युवकमा देखिएन कोरोना
अर्थतन्त्र जगाउने र संघीयता बलियो बनाउने बजेट आएन : गुरुङ
बिडी खाँदै थिए कपडामा आगो सल्कियो, घाइते उनको उपचार क्रममा मृत्यु
बजेटमा हल संचालकको असन्तुष्टी, भन्छन्–‘आन्दोलनको विकल्प छैन’
ओली सरकारको तेस्रो वर्ष : घुमीफिरी रुम्जाटार !
संक्रमितलाई लिएर रौतहटमा तनाव, १२ राउण्ड हवाई फायर
चीनले लगायो भारतबाट हुने सुँगुर र बँदेलको आयातमा प्रतिबन्ध
संक्रमित बढेपछि दक्षिण कोरियाका २५१ विद्यालय बन्द
Twenty20 World Cup schedule under ‘very high risk’: CA boss
बाँके,कपिलवस्तु र दाङका ८ जना कोरोनामुक्त
दीपक भन्छन्–‘आधा घन्टामै दर्शक निदाउने फिल्मलाई मौलिक भन्दै पुरस्कृत नगरौ’
विद्युतीय सवारीमा बढ्यो कर, यसरी बढ्नेछ मूल्य
स्थानीय सरकारलाई केन्द्रको बजेट : पोखरालाई सबैभन्दा धेरै, अरुलाई कति ?
कोरोना जितेर ६ दिनमै फर्किइन् भक्तपुरकी सङ्क्रमित जनप्रतिनिधि
७२ संक्रमितलाई निको बनाएका वीरगञ्ज कोभिड अस्पतालका नर्सहरूको अनुभव